Vaovao - Ny sehatry ny fanafarana sy ny fanondranana any Shina dia mbola miatrika fisalasalana bebe kokoa amin'ny 2021
[Mpanangom-baovao Global Times Ni Hao] tao anatin'ny roa volana voalohany tamin'ny 2021, dia nanomboka fanombohana tsara ny fanafarana sy fanondranana an'i Shina, ary ny tahirin-kevitra momba ny fiakarana maranitra isan-taona dia nihoatra ny nandrasana tamin'ny tsena. Ny haben'ny fanafarana sy ny fanondranana dia tsy mihoatra lavitra noho ny tamin'ny vanim-potoana iray ihany tamin'ny taon-dasa, fa nitombo 20% teo ho eo ihany raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny 2018 sy 2019 alohan'ny fipoahan'ny. Ny tampon'isan'ny pnemonia coronavirus any Shina, izay nodinihina ny tolakandron'ny 8 aprily, dia mino fa hatramin'ny taona lasa, dia nanatanteraka andiana politika maodely mahazatra momba ny varotra ivelany i Sina, niatrika ny fiatraikan'ilay valanaretina pnemonia satro-boninahitra vaovao. Nanana andraikitra lehibe tamin'ny fampihenana ny vidiny, ny fisorohana ny risika, ny fametrahana baiko ary ny fanitarana ny tsenan'ireo orinasam-barotra anatiny sy ivelany. Nilaza i Gao Feng fa tamin'ny ezaka niarahan'ny governemanta, ny orinasa ary ny indostria, nanomboka tsara ny varotra ivelany an'i Shina tamin'ny telovolana voalohany, izay vokatry ny anjara asa lehibe napetraky ny tsena amin'ny fizarana loharanom-bola sy ny andraikitra tsara vitan'ny governemanta.
Vao tsy ela akory izay, ny Ministeran'ny Varotra dia nanao fanadihadiana momba ny fanadihadiana momba ny orinasam-barotra vahiny mihoatra ny 20000. Raha ny valiny dia nihatsara ny kaomandin'ny orinasa raha oharina tamin'ny tamin'ny taon-dasa. Manodidina ny antsasaky ny orinasa no mihevitra fa ny fihenan'ny hetra, ny volan'ny hetra amin'ny fanondranana, ny fanamorana ny varotra ary ny fepetra politika hafa dia manana fahatsapana fatratra.
Mandritra izany fotoana izany, hita taratra ihany koa ireo orinasa fa mbola maro ny antony tsy marin-toerana sy tsy azo antoka amin'ny fivoaran'ny varotra ivelany amin'ity taona ity, ary misy ny risika toy ny tsy fahazoana antoka ny toe-javatra valanaretina, ny tsy fandriam-pahalemana eo amin'ny rojom-pamokarana indostrialy sy ny fahasarotan'ny tontolo iainana iraisam-pirenena. Ny orinasam-bolan'ny orinasa dia miatrika olana sy fanamby sasany ihany koa. Ohatra, ny vidin'ny fandefasana entana dia miakatra amin'ny ambaratonga avo, ny tsy fahampian'ny fahaiza-mitatitra sy ny anton-javatra hafa dia misy fiantraikany amin'ny orinasa mahazo baiko; miakatra ny vidin'ny akora, mitarika ny fiakaran'ny vidin'ny famokarana; ny fahasahiranan'ny mpiasa any amin'ny faritra sasany dia mbola misongadina kokoa ihany. Ho valin'izany, nanantitrantitra i Gao Feng, "dia hijery akaiky ny fivoaran'ny toe-javatra misy ifandraisany izahay, hitandrina ny fitohizan'ny filaminana, ny fitoniana ary ny faharetan'ny politika ary ny fanatsarana ny politikam-barotra mifandraika amin'izany."